Global Voices teny Malagasy · 18 Oktobra 2011
18 Oktobra 2011
Tantara tamin'ny 18 Oktobra 2011
Jordania: Governemanta vaovao, Faniriana sy Fanantenana!
Notendrena androany ny praiministra vaovao tany Jordania, taorian'ny nandefasan'ny ankamaroan'ny solombavambahoaka taratasy nankany amin'ny mpanjaka Abdallah, izay nitaraina noho ny nataon'ny governemanta notarihan'i Dr Marouf Bakhit. Nametra-pialana i Bakhit ary neken'ny mpanjaka izany. Ankoatra ny taratasy nalefan'ny solombavambahoaka, ny fialan'i Bakhit dia vokatry ny fielezan'ny hetsika nanohitra ny governemanta nanerana...
Amerika Avaratra 18 Oktobra 2011
Etazonia: Miha-matanjaka Ny “Occupy Wall Street”
Fony izahay namoaka ny lahatsoratra voalohany tao amin'ny "Occupy Wall Street," zara raha nipoitra tamin'ny pejy voalohany tamin'ny gazety tany an-toerana izany. Ankehitriny, miaraka amin'ny mpanaraka an'aliny maro, nahasarika ny sain'ny haino aman-jery nasionaly sy maneran-tany ny Occupy Wall Street, ary nihitatra tamin'ny tanàn-dehibe an-jatony hafa tany Etazonia ny tolona.
Yemen: Azizah Abdo Othman, Vehivavy Voalohany Maritioran'i Yemen
Maherin'ny 30 ireo olona mpitolona manohitra ny fitondràna no maty tany Yemen tamin'ny Sabotsy sy omaly, anisan'izany ny vehivavy maritiora voalohany tany an-toerana Aziza Abdo, izay maty voatifitry ny mpitifitra nandritry ny tolona tany Taiz. Maneho hevitra manoloana izany loza izany ireo Yemenita mpampiasa aterineto.